I-studio ethandekayo ecaleni kwe-laguna, i-8 'esuka ku-S. Marcos - I-Airbnb
I-studio ethandekayo ecaleni kwe-laguna, i-8 'esuka ku-S. Marcos
Iflethi yonke sinombuki zindwendwe onguGabriele
Isikhephe esikhawulezayo okanye i-vaporetto ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya okanye kwisikhululo, misa iArsenal okanye iGiardini.I studio enomtsalane.8' St-Marcos, 3' gardens of Biennale,12' ukusuka elunxwemeni lwaseLido, enomtsalane kwaye enoxolo.50m yohambo oluhle I-laguna ekhokelela eSaint Marc, kwelinye icala iibhotwe zakudala zaseVenice, kwelinye iMarina yaseVenice. ECastello, isakhiwo esisusela kwinkulungwane ye-16, sinamabala. imivalo kunye neendawo zokutyela ezilungileyo ezikufutshane.
Umtsalane wezithili zase-Italiya apho useva iVenetian endala. Umgangatho we-2 kwi-canal della Tana, imiqadi, ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo, igumbi lokuhlambela elinomtsalane elinebhafu, ibhedi enkulu eyi-1 m 90 yobubanzi kunye ne-IKEA armchair / iibhedi ezimbini ze-0.88m X 1.90m.Iivenkile, iibhari kunye neendawo zokutyela. Ukuhamba ukusuka eGiardini ukuya eSaint Marc kuthathwa njengenye yezona zinto zintle kwihlabathi.Isiqithi saseSan Michele, i-lagoon, izikhephe zayo - ii-gondolas kunye nezona zikhephe ezinobunewunewu-, amabhotwe kunye neecawe zenza iyure nganye yemini nobusuku umboniso owodwa.Izinto ezithengiswayo (ivenkile enkulu evulekileyo ye-COOP ivula iintsuku ezisi-7/7 ukusuka ngo-8 am ukuya ngo-10pm ngo-4 ')
4.64 out of 5 stars from 96 reviews
4.64 · Izimvo eziyi-96
Ubunyani. Thatha i-spritz (izinto ezikhethekileyo zase-Italian kunye neCampari, iwayini emhlophe kunye namanzi ahlwahlwazayo) ngentsimbi yesi-7 ngokuhlwa kwithambeka lebhari ngeGaribaldi okanye i-riva dei sete Martiri ejonge i-laguna kunye nokugcwala kwezikhephe.
Ngokuqhelekileyo ndiphendula ngokukhawuleza.
Inombolo yomthetho: M0270428014